musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » India Aviation: New Airlines paHorizon
Airlines • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • India Kupwanya Nhau • nhau • Kuvakazve • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
India indasitiri yendege, senge ingangoita nzendo dzese dzekushanya uye yekushanya, haina kana nguva inononoka, kunyangwe hazvo nguva iripano yakanaka kana yakaipa. Iyi nguva munguva, zvisinei, ine zvese zvinoonekwa zvekuve akanaka.
Jet Airways inogona kunge ichidzoka mukuzvarwa patsva, iine mari uye vashandi kubva kune zvitsva zviwanikwa.
Akasa Air inogona kusimuka gore rino risati ratombopera nekuda kwechikamu chikuru kumabhizimusi wezvemari, Rakesh Jhunjhunwala.
Vistara, Air Asia India, uye Air India vanovimbawo kuona kumwe kukura kwendege dzavo.
Panguva iyo COVID-19 yaive - uye ichiripo - ichikuvadza nendege, kushanya, uye hupenyu hwese, zvinouya nhau dzinogona kurira semumhanzi munzeve, kunyanya kune vangangove vafambi.
Mushure mezvakawanda zvave zvichiitika nendege zvese zvine chekuita nekurasikirwa nemamirioni emadhora nema crores nemaeuro - iwe unodoma mari - uye kutarisana nekuvharwa, tisingataure nezvekuiswa kwemari mune yakambokosheswa Air India, pane angangoita maviri ndege dziri kuuya panzvimbo yeIndia uye mudenga mune isiri-zvakare-kure ramangwana.
Pane hurukuro yakakomba yeiyo yakadonha Jet Airways kudzoka mukuzvarwa patsva, nemari uye nekushandira kubva kune zvitsva zviwanikwa. Sezvo hurongwa hurikuita kunge huri kuumbika nekukurumidza, kuchine marimu mazhinji nemabhaudhi anosara akasimbiswa vasati vafamba kubhururuka nendege yakazara-sevhisi zvakare.